Maitiro ekusarudza theme kana template kune yako Ecommerce saiti | ECommerce nhau
Maitiro ekusarudza theme kana template kune yako Ecommerce saiti
Chinyorwa kana template yeiyo Ecommerce saiti yako webhusaiti dhizaini yakagadzirira kushandisa iyo iwe yaunogona kurodha pasi nekuisa pane yako bhizinesi webhusaiti. Kusiyana nenzira yechinyakare yekugadzira chitoro chepamhepo kubva pakutanga, Chinyorwa chinokutendera iwe kuve nehunyanzvi uye hushamwari hwekutarisa online chitoro, mune imwe maminetsi.
1 Maitiro ekufunga kana uchisarudza iyo Ecommerce theme
2 Funga bhajeti yako
3 Funga nezve zvigadzirwa
4 Yakagadzirirwa nhare
Maitiro ekufunga kana uchisarudza iyo Ecommerce theme
Paunenge uchisarudza imwe Ecommerce saiti templateIwe unofanirwa kugara uchifunga kuti saiti inofanirwa kuve yekuzviratidza-uye kuzvitsanangudza. Iwo anonzwisisika e-commerce saiti matemplate akavakirwa pane zvakajairika dhizaini, pamwe nekushandisa kwakawanda kugamuchirwa dhizaini uye nzira. Usatsvage Misoro yeEcommerce Kunyangwe iwo ari matsva kana anonakidza, zvakanakisa kusarudza matemplate ewebhu ayo akajairika, anonzwisisika, uye ari nyore kushandisa.
Funga bhajeti yako
Paunenge uchisarudza Ecommerce theme zvakakosha kuti iwe utarise bhajeti yako uye iyo mari iwe yaunokwanisa kutenga yemufananidzo dhizaini. Kana bhajeti yako ishoma, sarudza matemplate ane mashoma kwazvo mabhena. Kazhinji vanopedzisira vasarudza dingindira rinotaridzika zvakanaka nemabhena, asi pavanopinza yavo dhizaini, ivo vanoona kuti muchokwadi kutaridzika kwechitoro hakusi izvo zvavanoda.
Funga nezve zvigadzirwa
Paunenge uchishandisa demo theme zviri nyore kufungidzira kuti iyo mifananidzo inoenderana nemifananidzo yezvigadzirwa zvako. Vagadziri vemusoro vanowanzoisa mifananidzo yezvigadzirwa inoenderana chaizvo netaimendi dhizaini. Naizvozvo yako zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogona kunge zvisingaite kunge zvakanaka.
Pakupedzisira, usakanganwa kuti iyo Ecommerce theme yesarudzo yako, Inofanirwa kuve yakagadziriswa nharembozha. Sezvo huwandu hukuru hwevanhu vachipinda paInternet uye vachitarisa pamapeji vachishandisa nharembozha dzavo nemaTablet, zvakakosha kuti yako saiti ivape chinogutsa kubhurawuza chiitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvidzidzo uye zviwanikwa » Maitiro ekusarudza theme kana template kune yako Ecommerce saiti
Nei Joomla ari mukuru weCMS zvemukati maneja?